ကုတင်အောက်ထဲ အင်းပြားထည့်ပြီး အောက်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်ကြံတာခံခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ – Suehninsi
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဆုပန်ထွာပဲဟာ သားလေးမွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်း သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဂီတအလုပ်တွေပါ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးဟာ အခက်အခဲ၊ အတိုက်အခံတွေနဲ့ ကြုံလာရတိုင်း နှစ်ယောက်အတူ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာဟာလည်း မြင်ရသူတိုင်းကို ကြည်နူးစေတာအမှန် ပါပဲနော်။ အခုမှာလည်း ပန်ပန်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပို့စ်လေးတစ်ခု
ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ” တော်တော်လည်း အာရုံနောက်ရပါတယ်။ ပဲခူးအိမ်မှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော်က တပတ်တခါ တယောက်ထဲ လာအိပ်ရတယ်။ အိပ်နေရင်းနဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ စိတ်ထဲက တမျိုးဖြစ်လို့ ဆိုဖာကိုဖယ်ပြီး ကြည့်လိုက်တာ အင်းပြား တပြားထပ်တွေ့ပြန်တယ်။ အရင်အိမ်ထောင်ကျွန်တော့မှာရှိပြီး ကွာရှင်းခဲ့တာ တိုင်းသိပြည်သိပါ။ အရင်တုန်းကလည်း အဲ့တာမျိုး အင်းပြားတွေခေါင်းအုန်းထဲမှာ
ထည့်ထားတာတို့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရွက်မျိုးစုံ ကုတင်ပေါ်က ခေါင်းရင်းမှာထားတာတို့၊ ဓာတ်ပုံကို နွားနို့နဲ့ စိမ်ပြီး ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့တာတို့၊အခန်းထဲမှာ မြေကြီးတွေထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကိုတွေ့တာတို့ မျိုးစုံ မြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ငါနေနေတဲ့ အိမ်ကိုတောင် အသေးမဆိုတဲ့ အခြောက်မကိုလွှတ်ပြီး အောက်လမ်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာ ယတြာတွေ ဘာတွေ အောက်လမ်းတွေ ဗေဒင်တွေ မျိုးစုံလုပ်နေကြတာလည်း အမျိုးစုံ ကြုံဖူး တွေ့ဖူး မြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ အမေချစ်အောင်ဆိုပဲ ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းတော့မသိဘူး…. ဒီ အင်းပြားကို ကြည့်ရတဲ့ပုံကလည်း ရှိနေတာ
တော်တော်ကြာနေတဲ့ပုံပါပဲ… သံချေးလိုတွေတောင်တက်လို့ အိပ်ခါနီး မဟာသမယသုတ်ဖွင့်ပြီးအိပ်တတ်တာလေးက ကယ်သွားတယ်လိုပဲထင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေအယုံအကြည်လည်းမရှိဘူး။ စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။ ဒီ Post ရဲ့ အစပိုင်းမှာရေးထားတဲ့ အတိုင်းတော်တော် အာရူံနောက်တာတော့ အမှန်ပဲ ဒီလိုစောက်ရူးအလုပ်တွေလုပ်လို့နင့်ကိုငါ့ဘဝနဲ့လဲပြီးကွာရှင်းခဲ့တာ ဘာပဲပြောပြောအိပ်ယာအောက်ကတွေ့တဲ့အင်းပြးမို့ကောင်းတဲ့ဟာတေ့မဖြစ်နိုင်ဘူး ”
ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ပန်ကလည်း ” သနားစရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျား။ဖေဖေ့ဘက်က အမြဲတမ်း၊တစ်သက်လုံး ပါရမီဖြည့်ရင်းရှိနေပေးမယ်။ ဘဝမှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အတူတူတစ်သက်လုံးရှိနေပေးမယ်။ဖေဖေ့ဘဝကို သနားချစ်ချစ်တာလည်းပါပါတယ်။ Fighting ဖေဖေ။မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူမကောင်းတဲ့လမ်းကိုလျောက်ရမှာပါပဲ။” ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ ” တျောတျောလညျး အာရုံနောကျရပါတယျ။ ပဲခူးအိမျမှာ အလုပျကိစ်စနဲ့ ကြှနျတျောက တပတျတခါ တယောကျထဲ လာအိပျရတယျ။ အိပျနရေငျးနဲ့ အိပျယာပျေါမှာ စိတျထဲက တမြိုးဖွဈလို့ ဆိုဖာကိုဖယျပွီး ကွညျ့လိုကျတာ အငျးပွား တပွားထပျတှပွေ့နျတယျ။ အရငျအိမျထောငျကြှနျတော့မှာရှိပွီး ကှာရှငျးခဲ့တာ တိုငျးသိပွညျသိပါ။ အရငျတုနျးကလညျး အဲ့တာမြိုး အငျးပွားတှခေေါငျးအုနျးထဲမှာ
ထညျ့ထားတာတို့ ဘာမှနျးမသိတဲ့ အရှကျမြိုးစုံ ကုတငျပျေါက ခေါငျးရငျးမှာထားတာတို့၊ ဓာတျပုံကို နှားနို့နဲ့ စိမျပွီး ဓာတျဆီလောငျး မီးရှို့တာတို့၊အခနျးထဲမှာ မွကွေီးတှထေညျ့ထားတဲ့ အိတျကိုတှတေ့ာတို့ မြိုးစုံ မွငျဖူးခဲ့ပါတယျ။ ငါနနေတေဲ့ အိမျကိုတောငျ အသေးမဆိုတဲ့ အခွောကျမကိုလှတျပွီး အောကျလမျးနဲ့လုပျခဲ့တာ ယတွာတှေ ဘာတှေ အောကျလမျးတှေ ဗဒေငျတှေ မြိုးစုံလုပျနကွေတာလညျး အမြိုးစုံ ကွုံဖူး တှဖေူ့း မွငျဖူးခဲ့ပါတယျ။ ငါ့ အမခေဈြအောငျဆိုပဲ ဘာရညျရှယျခကျြတှလေညျးတော့မသိဘူး…. ဒီ အငျးပွားကို ကွညျ့ရတဲ့ပုံကလညျး ရှိနတော
တျောတျောကွာနတေဲ့ပုံပါပဲ… သံခြေးလိုတှတေောငျတကျလို့ အိပျခါနီး မဟာသမယသုတျဖှငျ့ပွီးအိပျတတျတာလေးက ကယျသှားတယျလိုပဲထငျပါတယျ။ ဒါမြိုးတှအေယုံအကွညျလညျးမရှိဘူး။ စိတျလညျးမဝငျစားဘူး။ ဒီ Post ရဲ့ အစပိုငျးမှာရေးထားတဲ့ အတိုငျးတျောတျော အာရူံနောကျတာတော့ အမှနျပဲ ဒီလိုစောကျရူးအလုပျတှလေုပျလို့နငျ့ကိုငါ့ဘဝနဲ့လဲပွီးကှာရှငျးခဲ့တာ ဘာပဲပွောပွောအိပျယာအောကျကတှတေဲ့အငျးပွးမို့ကောငျးတဲ့ဟာတမေ့ဖွဈနိုငျဘူး ”
ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပနျပနျကလညျး ” သနားစရာကောငျးတဲ့ ယောကျြား။ဖဖေဘေ့ကျက အမွဲတမျး၊တဈသကျလုံး ပါရမီဖွညျ့ရငျးရှိနပေေးမယျ။ ဘဝမှာကောငျးကောငျးဆိုးဆိုး အတူတူတဈသကျလုံးရှိနပေေးမယျ။ဖဖေဘေ့ဝကို သနားခဈြခဈြတာလညျးပါပါတယျ။ Fighting ဖဖေေ။မကောငျးတာလုပျတဲ့သူမကောငျးတဲ့လမျးကိုလြောကျရမှာပါပဲ။” ဆိုပွီး မှတျခကျြပေး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။